Elevator Escalator Qalabka Wax Soo Saarka Soosaarayaasha Soosaarayaasha - Shiinaha Elevator Escalator Qalabka Soosaarka Soosaarka Soosaarka & Warshadaha
Nidaamka xakameynta Escalator
Shaqada xakamaynta korantada Waxaa jira laba qaab. Moodhka koowaad waa moodel caadi ah, midka labaadna waa habka dayactirka. Waa xaalad caadi ah marka dhammaan tuubooyinka aan dayactirka lahayn ee qolka mashiinka kore iyo kuwa hoose la geliyo. Koronto-yaraha ayaa la bilaabay inuu ku iibsado shaqaalaha furaha markii uusan qofna ku jirin. Shaqaaluhu waxay riixeeyaan batoonka joogsiga si ay u joojiyaan wiishka. Markuu nambarka furaha helo, waxaa la bilaabayaa wuxuuna ku shaqeeyaa xawaare lagu qiimeeyay. Ka qaad mid ka mid ah korantada aan dayactirka ku dhex jirin oo sanduuqa dayactirka geli sanduuqa dayactirka ...
Aruurinta goobta kulanka iskudhaca sawirka 3
Qaabdhismeedka Shaqada Escalator waa nooc ka mid ah qalabka socda ee socda oo ka kooban silsilad gudbiyaha qaab-dhismeedka khaaska ah iyo qalabka suunka ee qaab-dhismeedka khaaska ah. Waxay leedahay faa'iidooyin badan sida awoodda gaadiidka ballaaran, shaqaalaha gaadiid joogta ah. Marka shuruudda nabadgelyadu waa ka sareyso qalabka kale. Waxaa badanaa lagu isticmaalaa meelaha dadku isugu yimaado oo dadku ku badan yahay, sida suuqyada wax iibsiga, naadiyada, saldhigyada, gegooyinka diyaaradaha iyo jaranjarada. Dhismaha Wadada ugu weyn ayaa ku filan ...